China Dongshen borosy borosy manga resin mitana maharitra volo mainty volon'ondry lehilahy mpanamboatra borosy mando, mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Dongshen borosy ambongadiny Blue Resin mitana maharitra volo mainty Badger volon-doha ho an'ny lehilahy
Ny borosy fanaratsiana Dongshen dia vita tanana amin'ny volo mainty voajanahary sy tantana resin. Natao hanalefaka ny volombava alohan'ny aharatra, tsy misy mahasosotra ny hoditra. Tsy misy fihenan'ny volo, tsy misy fatiantoka tantanana, manala ny sakaizanao maharitra amin'ny fombafombam-bolo isan'andro. Ny loko sy ny marika manokana dia azo namboarina ihany koa.
Ny borosy mainty Badger dia sokajy badger mafy indrindra. Izy ireo dia mitazona rano be dia be ary mamorona lather tena tsara. Mpanety be mando maro no tia borosy volo mainty noho ny hamafiny. Ny sasany kosa tia ny maivana kokoa amin'ny badger, indrindra ireo izay manana hoditra marefo.
Fitaovana fatotra Volo mihombo (volo mainty badger).
Teo aloha: Dongshen borosy lafo volo voajanahary voajanahary volo bara resin mitana manokana marika borosy fiharatana ho nanalefaka volombava tarehy
Manaraka: Dongshen kabuki borosy mpanamboatra borosy tsy misy habibiana volo sentetika alimina tantely volo fototra borosy borosy
Dongshen makiazy borosy madio kokoa savony hatsaran-tarehy ...
Borosy makiazy Dongshen mahazatra mametraka privat ...
Dongshen matihanina makiazy napetraka vegan fi ...
borosy makiazy napetraka, Manaova borosy, Faritra fiharatra, Fitaovana borosy makiazy, Barber Shave, Mametraha makiazy borosy,